पुरुषका लागि गर्भनिरोधक चक्की, यौन चाहना र उत्तेजनामा कस्तो असर ? - ♣भिडियो जुलुम♣
Homeमनोरन्जनपुरुषका लागि गर्भनिरोधक चक्की, यौन चाहना र उत्तेजनामा कस्तो असर ?
पुरुषका लागि गर्भनिरोधक चक्की बनाउने प्रयासले पहिलो सफलता पाएको छ । पुरुषले प्रयोग गर्न मिल्ने गर्भनिरोधक चक्की प्रारम्भिक मानवीय सुरक्षा परीक्षणमा सफल भएको विशेषज्ञले बताएका छन् ।
दिनको एकपटक खानु पर्ने चक्कीमा शुक्राणु उत्पादन बन्द गर्ने हर्मोन राखिएको छ । पुरुषका लागि अहिले कण्डम वा भ्यासेक्टोमी मात्रै गर्भनिरोधक साधनका रुपमा उपलब्ध छन् । यो चक्कीको प्रयोग हुन थालेमा पुरुषका लागि तेस्रो विकल्प बन्ने छ ।